Kal-Fadhigii Ogaden Voice For Peace [VOP] ay Qabatay oo Guul ku Dhamaaday – Rasaasa News
Kalfadhigan ayaa wuxuu kaga duwanaa kuwii hore iyada oo si guud loogu lafa-guray khilaafaadka iyo colaadaha ka aloosan guud ahaan geeska Africa , gaar ahaanna gayiga Ogadenia.
Codka Nabad-raadinta Ogadenia (OVP) oo sanadihii dhawaa si xajmi weyn leh u dardar galisay u ololeynta qaddiyadda Ogadenia kana soo hoysay guulo taariikhi ah ayaa waxay madasha Nababba & Caddaalada Dunida (John B. Kroch Institute of Peace and justice) isugu keentay hay’ado caalami ah oo dhamaantood ka warbixiyey ahmiyadda shirkan iyo u heelanaanta raadinta qaranimada Ogadenia. Waxaa ka mid ahaa ururada isugu yimid kalfadhigan:
A- Isbahaysiga Caalamiga ah & Nabad Dhisidda ( Alliance for peacebuilding).
B- Wasaaradda Arimaha Dibadda ee dalkan Maraykanka, xafiiskeeda Arimaha Africa .
C- Machadka Daraasaadka & Cilmi Baadhista Geeska Africa (IHAS).
D- Hay’adda Maaraynta Xuquuqda Afrikaanka ( African Rights Monitor).
E- Guddiga Xuquuqul-Insaanka Ogadenia (OHRC).
F- Mas’uuliin ka kala socday aqalka Sharcidejinta ee Maraykanka.
G- Rorry Lineane oo ahayd haweeney ay milatariga Ethiopia bahdileen kana socotay Jaamacadda Wisconson, oo ka warbixisay dulmiga haysta qawmiyadaha ku hoos jira Ethiopia .
H- Professor Khalif Galaydh R/Wasaarihii horee Somaliya oo bare sare ka ah jaamacadda Minesota isla markaana ah la taliye sare oo ka tirsan hay’aadka daraaseeya khilaafka caalamiga ah.
Waxaa ugu horayntii si qoto dheer uga warbixiyey taxanaha taariikheed ee qaddiyada Ogadenia, khilaafaadkii soo jireenka ahaa ee ka dhex aloosnaa Ethiopia iyo bulshada reer Ogadenia iyo ahmiyadda ay leedahay so af-meeridda dhibka ka jira gayigaas madaxa Codka Nabad-raadinta Ogadenia (OVP) mudane Abdi Mahamoud. Wuxuu mudane Maxamed Sheikh sidoo kale muuqaal ahaan u soo bandhigay waxqabadkii iyo wada-shaqayntii uu ururka OVP la yeeshay qaar ka mid ah haw-wadeenada ugu sareeya dalkan dawladda Maraykanka.
Chik Charles oo ah madaxweynaha hay’adda soo Afjaridda Khilaafaadka iyo Nabad-dhisidda ayaa si mug weyn u lafa-guray mudnaanta ay leedahay inay cid saddexaadi qayb ka qaadato soo afjariida khilaafka siyaasadeed, wuxuuna tusaalayn u soo qaatay guushii ay ururkiisu ka soo hooyeen khilaafkii u dhexeeyay Ethiopia & Ereteria oo uu isagu madax ka ahaa.
Mudane Xamse Warfaa oo hormuud u ah Machadka Daraasaynta & Cilmi-baarista Geeska Afrika (IHAS) ayaa si cilmiyeysan madasha ugu soo bandhigay xidhiidhka ka dhexeeya asaaska dhibaatada Ogadenya, saamaynta bulsheed uu leeyahay iyo xalka meeshuu jiro.
Madaxa Guddiga Xuquuqul-inssanka Ogadenia, marwo Fawzia A/kariin ayaa sidii looga bartay ku fara-yaraysatay xanuunka uu leeyahay ku tacaddiga xuquuqda aadanaha ee umadda Ogadenia iyadoo si cilmiyaysan ugaa warbixisay dhacdooyinka murugada leh.
Masuulkii ka socday Wasaaradda Arimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa faalo dheer ka bixiyey sida ay uga go’an tahay Wasaaradiisa inay qayb libaax ka qaadato soo af-jaridda khilaafkan siyaasiga ah, isaga oo hadalkiisa sii watana wuxuu sheegay inaysan wasaaraddoodu sanad walba ka soo qayb gasheen kalfadhiyada OVP haddaysan daacad ka ahayn qaddiyaddan. Warbixintiisaa ka dibna wuxuu jawaabo talantaali ah ka bixiyey su’aalihii ka imanayey qaybta aqoonyahankii isugu yimid shirkan.
Maalmihii xigay ayaa fursad u heleen aqoonyahankii reer Ogadenia ee shirka fadhiyay inay wada hadalo iyo doodo dhinacyo badan taabanayey si gooni ah u qaataan, iyagoo ku findhicilayey sidii loo labanlaabi lahaa loona joogtayn laha dadaalka iyo kal-fadhiyada noocan oo kale ah ee lagu martiqaadayo ururada , hay’aadka iyo masuuliinta ugu miisaanka culus dalkan maraykanka. Isla markaana loo soo saari lahaa go’aanadii ka soo baxay kalfadhigan iyada oo dhamaan isku mid laga noqday in mawqifkani noqdo mabda’ ay haw-qabad daba taalo.
Maamulka OVP ayaa dhiniciisa balanqaaday inay labanlaabi doonaan xidhiidhka iyo wargalinta joogtada ah ee ay la yeeshaan xildhibaanada dalkan maraykanka